EyeThupha 8, 2018 admin
Lightning Network yandise ku 3000 nodes, umthamo kusondela 100 BTC
Lightning Network iyaqhubeka ukwanda ngamandla njengoko igqitha 3000 iindawo kwi network mainnet. Idatha evela iliso resource 1ml.com iqinisekisa ukuba amandla Lightning Network liye landa 85% mandulo 30 iintsuku, ukuzisa imali mainnet Umbane xa iyonke ukuba 97 BTC ($628,000).
Lightning wawuvela wangenela ngeenxa ekuqaleni 2018 ngendlela yayo mainnet, kunye nokukhula uqhu- nge q2. NgoMeyi 2018, umthamo saqhubeka asezantsi noko xa nje 18 BTC, phambi kokuba ukunyuka okukhulu yaqala ngo July 2018.
Study Yale Economist ithi kufanele zonke iiphothifoliyo kuziwe ubambe Bitcoin
Ngokutsho UProfesa Aleh Tsyvinski, Bitcoin kufuneka sibe yinxalenye kwepotfoliyo, kungakhathaliseki nokuba umntu nomdla kuloo cryptocurrency okanye. Kuba ukwakhiwa ngokupheleleyo portfolio omnye, i Economist ithi Bitcoin kufuneka akhawunti ukuba okungenani 6%. Abo ngaphantsi nomdlandla malunga cryptocurrency idumileyo ehlabathini, kumele ubambe 4%. Kungakhathaliseki indawo umntu ngalo mba, Bitcoin kufuneka kubandakanye ubuncinane 1% kwepotfoliyo, ngeenjongo diversification.
Isifundo obizwa, Imingcipheko kunye Ubuyela of Cryptocurrencies, Likwacacisa inkalo ngokukhethekileyo ezintle cryptocurrencies xa kuthelekiswa isitokhwe yesintu bond. Ukusebenzisa ratio Sharpe kaThixo, Tsyvinski wabonisa ukuba nemali digital zibonisa enesakhono ukubuya, nakuba sokuguqu zabo. kwakhona, isifundo bagqiba ukuba umfutho kunye umtyali ingqalelo ezi Abaqhubi eziphambili ixabiso.
Ingxelo Daily Market Kraken for 07.08.2018
Yintoni Network Unboxed? Un...